Isikhokelo seParja yeCarja: Indlela yokubusisa imoto yakho entsha
by UJennifer Polan (Jayathi Kumar)
Iyintoni i-puja yemoto? Ukubeka nje, ngumcimbi wokungcwalisa okanye ukusikelela imoto entsha egameni leNkosi kwaye ugcine ukhuselekile kwiimpembelelo ezimbi.
AmaHindu abusisa zonke izinto kunye nezixhobo ezisetyenziselwa ubomi bemihla ngemihla - amakhaya, iimoto , izithuthi ezihamba ngeenqwelo-moya zazo zonke iindidi, izixhobo zasemakhaya, ezifana nabaxube, abagayi, izitofu, iiTV, i-stereos, njl. I-puja yenziwa ekuqaleni ukuphumeza, ngaphambi kokuyisebenzisa okanye ngokukhawuleza emva kokuthenga. Xa uthengela imoto entsha okanye ikhaya, uyenzela i-puja ngaphambi kokuba uqhube imoto okanye uhambe endlwini entsha.
Apha, ndiya kuzama ukuchaza le puja. Nangona kunjalo, iinkcukacha ze-puja ziyahlukahluka ukusuka ku- 'pujari' ukuya ku- 'pujari' (umbingeleli wamaHindu).
Indlela Yokusikelela Ngayo Imoto Entsha
Biza iThempeli lakho laseHindu lendawo uze ucele ukusetha i-aphoyintimenti. Oku akusoloko kuyimfuneko, kodwa kuyinto enhle ukwenza njalo awubonakali ngosuku xa ungeke ufumane ixesha le-pujari ukwenza i-puja, enokuthatha malunga nemizuzu eyi-15-20. Ukongeza kokumisela ixesha, cela malunga nemali. E-Syracuse iHindu Mandir apho ndafumana khona imoto yam puja, ixabisa i-dollar ezingama-31. Ngokuqhelekileyo, umrhumo uya kugqitywa ngo-1 - ngokokuba inombolo engavumelekanga. Nangona inani lamanani alithathwa njengento enobungakanani.
Ngaphambi kokuba iirekhodi ziqale, ndihlamba imoto entsha yemoto kwaye ndisula ihlambuluke.
Oko Uya Kufuna
Oku kuyahluka kancinane ukusuka ethempelini ukuya ethempelini, kodwa ngokubanzi, izinto ezifunekayo zibandakanya:
Imali yokuhlawula i-pujari
(Optional) Ganesha isithixo ukubeka kwideshibhodi
Umnini wemoto uthatha inxaxheba kwi-puja kunye ne-pujari, njengokuba abanye babukela inkqubo. Kulo mfanekiso (ngasentla) ndingena-pujari (ngakwesokudla) kunye nomama (ngakwesobunxele bam). Into yokuqala endimele ndiyenze yayiyamkela 'amanzi angcwele' ngakwesokunene sam kwaye ndihlamba izandla zam puja. Oku kwaphindwa kathathu. Kwietempileni, umyalelo wokuba ukwamkele izinto ngakwesokunene. Ndenza oku ngokubeka isandla sam sasekhohlo phantsi kwesandla sam sokunene.
Kula ma pujas, kuqhelekile ukuba umntu owenziwe yi-puja akayi kukwazi ukuba kuya kwenzeka ntoni emva koko. Ngenxa yesi sizathu, i-puja (njengamasiko amaninzi amaHindu) inokutshatyalaliswa.
Ukuphindaphinda kathathu, ndiyamkela irayisi kwi-pujari ukuze ndifefe phambi kwelo moto. Kweminye imikhosi ye-puja, ezinye iintlobo zokutya zingenziwa.
I-pujari (umbingeleli) idonsa i- swastika (uphawu olungamaHindu) kunye nomnwe wesithathu wesandla sokunene (lo ngumunwe ongenamdla, kuthiwa umfazi kufanele afake isicelo kumkum ebunzini ngomunwe). Le fayile isetyenziswe kwimoto nge powder yomxube exutywe ngamanzi, engangcolisi imoto. Inokutsalwa kunye ne-sandalwood paste. I-swastika - ezalelwa eIndiya ngaphezu kweminyaka engama-5 000 eyadlulayo-isisimboli (inhlanhla) kunye neendlela "zokuphila".
Emva kokuba i-swastika ikhishwe, ndiphinde ndinike ilayisi ukuze ndisikelele i-swastika ngokufafaza ilayisi kuyo kathathu. Ukufafaza ngamnye, ndinikwe izigulana zokufunda.
Okwesibini isinyathelo esiphindaphindwayo, ngethuba apho ndicamngca ngeNkosi Ganesha ndiphinde ndiphinde ndiphinde ndiphinde ndifunde iingcwele. Esinye isethi seemantras ziquka ukuphindaphinda 11 kuma-108 amagama eNkosi Ganesha.
Ngoku ndikhanyisa iziqhumiso. I-pujari (umbingeleli) ithatha oku kwaye ijikeleze i-swastika kathathu kwinqanaba elisezantsi, ize iwathathe ngaphakathi emotweni kwaye ijikeleze ngokujikeleza isondo ngokuphindaphinda kathathu, ngokuphindaphinda i-mantras.
I-pujari ifake i-Ganesha encinci isithixo kufuphi nevili. Oku akuyiyo inyathelo eliqhelekileyo, kodwa enye ndiyicelile isithixo endikunike yona.
Ukufakela le Ganesha, kwakukho i-puja encinci yesibini eyadlula imizuzu emihlanu. Inje yayinguGaneshaclos encinci kwimeko encinci yeplastiki evulekileyo. Kwindibano yam, i-pujari yavula ityala ephethe iGenesha yam, ndandibeka amanzi angcwele ngaphakathi kwayo, ke wabeka irayisi kuyo kathathu. Emva koko wakhupha irayisi, washiya iintlobo ezintathu eziseleyo ngaphakathi kwimeko, wavala iplastiki kwaye wayifakela kwibhodi ye-dash emva kwesondo. Isitopu solu hlobo kufuneka sifumaneke apho umqhubi angakubona khona, esebenzisa ipati yokunamathisela eyayisekho.
Ndithenge ikhonkco kwivenkile ngaphambi kwexesha. Kulo nyathelo, umnini wemoto uyaphula ikakhukhunta kufuphi nekotya langaphambili elingaphambili kwaye ufefe amanzi amanzi kwikoton. Icoconut igcinwa njenge prasadam (umnikelo wokudla oyingcwele owanikwa kuThixo ngexesha le-pujas) kwaye udliwe kamva.
Ndandithenge iil lemine ngaphambili, kwaye i-pujari ngoku ibeka enye ngaphantsi kwelinye itayiti. Emva koko, ndangena emotweni ndaza ndahamba nayo ngakwesokudla. Kwakukho umzila ojikelezayo phambi kwethempelini, endiyijikeleza kanye. Esi siko kukukrazula isithuthi siphi na igalelo elibi. Abanye abantu baqhube ngeenxa zonke kathathu, kwaye kwezinye iithempelini, umqhubi uya kuqhuba ngokujikeleza itempile ngokwakhe.
I-Prasada: Ukunikezwa kokutya koThixo
Iimpawu ezinkulu zamaHindu
Imvelaphi kunye nembali yeBauls yaseBengal Ukuxuba iTekisi yoMculo
Yiyiphi "Intlawulo" kwiNkqubo yeeKholeji zeeKholeji?
I-oyile yoMnqophiso: I-Scam okanye i-Real Deal?
UAbheli - uMartyr wokuqala kwiBhayibhile
Iingoma zomculo 101
Imbali yemikhosi yamaKristu yePasika
Indlela yokwenza uVavanyo lweFlamme